Ungalilungisa kanjani iphutha le-dpkg: isexwayiso: `ldconfig 'ku-Debian Testing | Kusuka kuLinux
Ungalilungisa kanjani iphutha le-dpkg: isexwayiso: `ldconfig 'ku-Debian Testing
Namuhla ngithathe isinqumo sokubuyela ku Ukuhlolwa kwe-Debian. Njengoba inkinga ibikade I-Kernel ngokusobala, ngiyishiyile leyo eletha Cwilisa ifakiwe futhi yavuselela amanye amaphakheji.
Bengivuselela nge I-Synaptic lapho ngibona ukuthi kuthatha isikhathi eside futhi kwabambeka lapho ngizama ukuyifinyelela. Ngibulale inqubo nge-console futhi ngagijima:
Ukuqedela ukumisa amaphakheji alahlekile, kepha: Isimanga !!! Ngithole iphutha elangitshela:
Bese-ke senzani? Ku- I-Linuxmint-Hispanic sinikeze isixazululo.
Sivula ifayela le- ukuphela njengezimpande futhi sibeka:
Ukuyigcina ihleliwe ohlelweni sinezinketho ezimbili. Sengeza kufayela / njll / ama-sudoers imigqa elandelayo:
Noma sifaka ngaphakathi kwe- .bashrc:
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » I-GNU / Linux » Ungalilungisa kanjani iphutha le-dpkg: isexwayiso: `ldconfig 'ku-Debian Testing
Bengicabanga ukuthi uDebian nguyena ophethe ivesi futhi angikaze ngehluleke HAHAHAHAHA
Ngokuqondile, sikhuluma nge-Debian Testing, lapho noma yini ingahluleka (yize kuyivelakancane) ... Uma ungafuni amaphutha, bese usebenzisa iStable.
Fuck ... kuhle kakhulu
Ukuminyanisa kwenzelwa ukuhlala ngokuthula, Ukuhlola kwenzelwa ukuzama futhi i-SID ingeyabanesibindi
hahahaha ngiphakamisa lelo vesi kanye lapho ngifunde eduze "I-Slackware ukuphela kwe-distro esele yamadoda" hahahahaha
Damn, ngitshele ukuthi bafunani .. Ngisebenzisa iDebian, Fedora, Arch, openSUSE, Centos (ngaleyo ndlela) ngaphambi kweSlackware noma iGentoo ..
Hahaha i-debian eyiqiniso engazinzile impela ayizinzile.
ingasaphathwa eyokuthi u-Elav, namuhla angisuki ku-LMDE.
Hehehe. Ngihlala ngibuyela kumama distro. I-LMDE ilungile, kepha ngihlala nginesidingo sokufaka yonke into kusuka ekuqaleni, futhi kuphela engikudingayo. Noma kunjalo, ngihlala ngisebenzisa ama-repos e-LMDE kwezinye izinto.
Haha kahle ngiphila nomxube wokuhlolwa nokungazinzi. Okwamanje ngaphandle kwenkinga nginezinyanga ze-6 ngaphandle kokufaka i-haha.
Ngokuvamile, uSid uzinze kakhulu kuno-Ubuntu ne-Arch, yini enye, ngicabanga ukuthi i-Unstable izinze kakhulu kunalezo ezimbili ...
Ungayenzi ngokweqile… Uzinze uzinze kakhulu kune-Arch? Yebo, angikaze ngibe nezinkinga zokuzinza nge-Arch, isinambuzane esincane eNepomuk ebesilungiswe ku-KDE 4.7.2, futhi isiqiniseko sokungaqiniseki asiqapheli noma sipholishiwe.
Ukungazinzi kuyefana ne-Arch. Eqinisweni, i-Arch yimbi kakhulu, ngoba okuvelayo sekuvele kuvuselelwe, ku-Unstable akunjalo.
I-Arch ingesinye sezinze kakhulu, futhi azibuyekezi njengezingahambanga, uma okuthile kuyi-beta, abakubeki.
Ithimba le-Arch alibeki ummese entanyeni yanoma ngubani ukuze kusebenze i-Testing
Angikaze ngibe nezinkinga zokuzinza nge-Arch
Bayibiza kanjani iBeta? Ngoba namuhla i-KDE "izinzile" futhi namuhla isezinqolobaneni ze-Arch. Ngakho-ke ngawo wonke amanye amaphakheji .. Ngakho-ke ngicela uchaze ukuthi kungenxa yakho ukuthi bacabanga okuthile nge-beta.
Kukhona i-Testing repo ye-Arch, lapho amaphakheji ayangena okwamanje. Ngemuva kwamahora ambalwa wokuhlolwa, kwesinye isikhathi izinsuku (yebo, izinsuku ... mhlawumbe uyakhohlwa ukuthi i-KDE 4.7 ithathe cishe isonto ukufaka izimpumuzo ezizinzile) lelo phakethe libekelwa ukuphumula okuzinzile.
Ungazami ukungikholisa. Uchitha isikhathi sakho.
HAHAHAHAHA angifuni ku-HAHAHAHA, akekho ozongikhokhela okungaphezulu noma okuncane ukuze usebenzise i-Arch noma into efana naleyo LOL !!!!!
Singakudingida ngokungapheli, ngiyayazi indlela yokuqeda lokhu kepha awuzange wamukele ngenkathi ngikuhlongoza ... kulula (futhi manje ngiyakukhumbuza), uzosebenzisa iDebian Unstable futhi ngizoqhubeka nokusebenzisa i-Arch yami , futhi sizobona ukuthi iyiphi i-OS enokungazinzi okuningi kunenye 😉
Uthini? Do… uyakwamukela ukubheja? 😉
Angisebenzisi iDebian Unstable ngeqiniso elilula lokuthi angihleleli ukuchitha impilo yami ngibuyekeza i-inthanethi. Ngijabule ngezinqolobane zami zasendaweni zokuhlola. Ngizobona usuku lapho kungenakwenzeka ukuzulazula ukuthi uzokuvuselela kanjani i- Ñej Ñej Ñej… Futhi akudingeki ngikwenze ukwazi ukuthi yikuphi okuzozinza kakhudlwana. Sengivele ngiyakwazi lokho: Debian.
Vele kunjalo ... kunjengoba besho, akukho mpumputhe omubi ukwedlula lowo ongafuni ukubona, akunjalo? I-LOL.
Noma kunjalo, into ebalulekile ukujabula nge-distro esetshenziswa yiwo wonke umuntu, futhi noma ungakhathali ukugxeka i-Arch (ngokususelwa kunqubo yakho uqobo), ngiyayithanda deal… bhekana nayo. LOL !!!
ICapricho yilokho okukuphawulelayo. Uyazi ukuthi ukuphela kwesizathu osebenzisa i-Arch, kungenxa yokuthi ngokusho kwakho, i-KDE isebenza lapho kangcono kunanoma iyiphi enye i-distro oyizamile. Angiyimpumputhe, ngizamile ukwabiwa okuningi kunawe futhi uyakwazi, njengoba wazi futhi ukuthi bekufanele ufake Ubuntu kwi-PC, ngoba i-Arch yakho ethandekayo ayikuvumelanga ukuthi usebenzise i-Kiwix hhayi phambili noma emuva. Sekunesikhathi esingakanani uzama? Ingabe bekufana nezinsuku ezi-3 kwesokudla?
Isikhathi yimali mfowethu. Mhlawumbe lapha osebenza khona ungachitha isikhathi sakho uzama ukwenza okuthile kusebenze, kepha hhayi kuzo zonke izindawo, uma uqonda engikushoyo. Kungakho ngisebenzisa iDebian, ngoba ngiyakwazi ukubeka konke kusebenza ngaphandle komsebenzi omningi, ngokushesha nangokuzinza okuqinisekisiwe.
Cha, akusona isifiso, ukuthi i-Arch + KDE ingivumela ukuthi ngibe nenguqulo yakamuva yayo yonke into, ngokuzinza okuhle (noma ngabe uyakuphika…), futhi kuyi-KISS… ukuze ngikwazi ukufaka yonke into kusuka ekuqaleni 🙂
Yebo, uzame ama-distros amaningi kunami, kepha ungumsebenzisi we-Gnome hhayi umsebenzisi we-KDE, ake sithi sinezintshisekelo ezahlukahlukene.
Entweni ye-Kiwix, umlingani olula ... lokho ukuyifaka kuseva, futhi ngasho nini ukuthi i-Arch kwakuyi-distro elula? Yebo, kungithathe isikhathi eside ukuzama ukwenza iKiwix isebenze ku-Arch, ekugcineni I awuphumelelanga ... kepha ngiyaqiniseka ukuthi le nguqulo entsha ye-Kiwix izosebenza kahle kimi, ngizokwenza isivivinyo kukhompyutha ephathekayo ezinsukwini ezimbalwa, ukuze ubone see
Funda izingoma zami: Isikhathi Imali. I-Arch yokudlala nokuzikhohlisa: Kulungile. Kepha angicabangi ukuthi noma ngubani oneminwe emi-2 yebunzi uyayinaka into "ebucayi kakhulu." Ungayicabanga inkampani okufanele ilahlekelwe amahora amabili kuya kwayi-2 ngenxa yokulungiselela okuthile okulula njenge-Virtualbox? I-Kiwix ingasebenza manje, kepha lapho ibidingeka, ayisebenzi. Yilokho engikushoyo. Umuntu obucayi akanakulinda umuntu othile kwi-Arch Community ukuthi anqume ukuthi kukhona okusebenzayo.
I-KISS ibalulekile kimi (futhi ungitshele izinzuzo ezikunikeza yona), futhi ngamaphakeji ami ku-Testing ngisesikhathini futhi kulapho ngikubuza khona umbuzo ofanayo nawe. Kungani kufanele i-Arch isebenzise, lapho nginakho konke ukuzinza, ukuphepha nokuvuselelwa engikudingayo?
Ake sibone ... nami angihlanyi. Kusiphakeli ngokusobala bengizofaka iDebian Stable, angizimisele ukuzibulala ukufaka i-Arch kuseva yenkampani.
Ngikhetha i-Arch kunokuhlolwa, ngenxa yokuthi e-Arch ngizoba namaphakeji ngaphambili, ukuthi e-Arch ngilungisa izinto ezingeni "eliphansi" (ngokwesibonelo, amamojula azophakanyiswa, izinsizakalo, njll, noma uzophika kimi ukuthi eDebian beza izinsizakalo eziningi kanye ne-shit ngokuzenzakalela kune-Arch?).
Unokuqina, ukuphepha nokuvuselelwa okudingayo, iDebian ayinginikeli ncamashi engikufisayo, i-Arch yebo, lokho kulula. Isibonelo, lapho kuvela uhlobo olusha lwe-KDE (ngisho i-KDE ngoba yisona sizathu esikhulu esenza ngikhululeke kakhulu nge-Arch) ekuLivivinyeni ingena sekwephuze kakhulu, kuthatha isikhathi eside, kuzofanele ngisebenzise okungazinzile noma okubi kakhulu. .. bese usho ukuthi yini efuna umlingani, kepha isipiliyoni SAMI somuntu siqu nge-Testing kudala sasingagculisi neze, Singazinzile angifuni nokukuzama ¬¬
Ngempela, lapho ngiqhubeka ngokwengeziwe nalokhu kushintshana okungenangqondo, kulapho ngibona khona ukuthi zimbalwa kangakanani izimpikiswano okufanele uvikele zona distro othandekayo.
Ngincamela i-Arch kunokuhlola, ngenxa yokuthi ku-Arch ngizoba namaphakeji ngaphambili, ukuthi e-Arch ngilungisa izinto ezingeni "eliphansi" (ngokwesibonelo, amamojula azophakanyiswa, izinsizakalo, njll., Noma ungiphike ukuthi eDebian beza izinsizakalo eziningi kanye ne-shit ngokwakhona kune-Arch?).
Ngemininingwane yakho, iDebian inenketho yokufaka efana ne-Arch, lapho engingafaka khona kuphela engikudingayo, kepha woza, kuma-masochists, sesivele sinakho.
Unokuzinza, ukuphepha nokuvuselelwa okudingayo, iDebian ayinginiki lokho engikufunayo, i-Arch ikwenza, lokho kulula. Isibonelo, lapho kuvela uhlobo olusha lwe-KDE (ngisho i-KDE ngoba yisona sizathu esikhulu esenza ngikhululeke kakhulu nge-Arch) ekuLivivinyeni ingena sekwedlule isikhathi, kuthatha isikhathi eside, kuzofanela ngisebenzise okungazinzile noma okubi kakhulu. ..
Sengivele ngiyakutshela. Sizobona usuku lapho ukubuyekezwa okuningi kuzokwehlisa uhlelo. Uyazi ukuthi nginehleko elibulalayo eligcinelwe umzuzwana ...
bese usho okufunayo mlingani, kepha isipiliyoni SAMI somuntu siqu nge-Testing kudala sasingagculisi neze, Singazinzi angifuni ngisho nokuzama ¬¬
Futhi sibuyela entweni efanayo engiyishilo kokunye ukuphawula. Angisazifanele izimpikiswano zomuntu okwathi ezinyangeni ezimbalwa ezedlule wavikela izinyo nesipikili Ubuntu, manje wamhlasela evikela okunye ukusatshalaliswa. Tshela abafundi ukuthi wazama kudala kangakanani Ukuhlola .. Ngoba ngokwazi kwami, kubonakala kimi ukuthi Ukuhlolwa kwakho bekukwi-Debian Sarge, noma i-Debian Etch .. Ngabe lina kangakanani kusukela lapho? Etch, Lenny, Squeeze futhi manje Wheezy.
Ngokwethembeka, kulapho ingxoxo yami yafika khona. Lapho unezimpikiswano eziqinile, uyazi ukuthi ungangitholaphi 😀
Ngavikela futhi ngavikela lokho uBuntu okwakuyikho eminyakeni embalwa eyedlule, njengamanje angikuniki nepeni ngakho. Ngabe kufanele ngivikele umkhiqizo noma igama esikhundleni somkhiqizo? Ngibuthandile Ubuntu 8.04, 8.10, ngisho no-9.04, bakhulu, kepha-ke baqala ukungilethela izinkinga zokuzinza, yingakho njengoba usho: "Ngiyikhahlela", ngoba nje angikuthandi lokho osekuyikho, futhi ngiyakholelwa kimi KONKE ilungelo lami lokuvuma noma ukungavumelani nokuthile.
Futhi kusobala ukuthi ngihlala ngicacisa ukuthi ngikhuluma ngokwesipiliyoni SAMI, futhi kufanele kube njalo ngoba angikwazi ukukhulumela abanye. Ubuntu 10.10 yayibulala kimi, ngenkathi abanye abasebenzisi benza kahle ... kuhle kubo, ngiyazikhulumela.
Okubonakala ungakuthandi ukuthi ngithe umvikeli woBuntu nobumbano akunjalo? HAHAHA !!!!
Futhi yebo ndoda ngiyazi, yenza umlomo wakho ube manzi ukucabanga ukuthi ku- «pacman -Syu» uhlelo lwenza ngishayeke, kahle ... wonke umuntu ufuna okuthile, yize kaningi kungagcwaliseki HAHA.
Noma kunjalo ake sibone ... IsibindiIsistimu iphahlaze kangaki ngemuva kokuyibuyekeza ku-Arch?
Akukho. Lapho uhlelo lwami luphukile, kungenxa yokuthinta izinto obekungafanele ngibe nazo.
U-Elav, noma yini oyigqoka isibuyekezo akukhona ngaphandle kokucabanga, ngaphandle kokuthi wenze kusebenze i-Testing, okungaphoqelekile, empeleni anginakho ukukusebenzisa futhi hhayi ngenxa yalesi sizathu labo base-Arch bathumele umdlwenguli okhuluphele futhi omubi ukuba angihlukumeze .
Futhi akudingeki ukuthi ngikwenze ukuze ngazi ukuthi iyiphi ezozinza kakhudlwana. Sengivele ngiyakwazi lokho: Debian.
I-Debian ku-Stable, yeka ukukhuluma bese wenza isivivinyo uqhathanisa i-Arch ne-Debian Sid, uma ufuna ngingayidlulisela naku-Let Us Use Linux kusuka lapha.
Akukaze kufike kimi ukusetha iseva ku-Arch, okokuqala ngoba kuseva ngincamela ukuhlolwa ngokujula nangokwesibili ngoba kuseva iminyaka yobudala bamaphakeji iyahluzwa
okuwukuphela kwesizathu esenza usebenzise i-Arch, kungenxa yokuthi ngokusho kwakho, i-KDE isebenza lapho kangcono kunanoma iyiphi enye i-distro oyizamile
Ku-Gentoo kusebenza kangcono ngoba kungaphezulu kwe-KISS kune-Arch, ngalowo mthetho we-KZKG amathathu ^ uGaara uzobe esebenzisa iGentoo
Sekunesikhathi esingakanani uzama? Ingabe bekufana nezinsuku ezi-3 kwesokudla?
Uma uqonde ukufaka i-Arch ngoba emahoreni amabili ubuningi une-Arch + Kdebase esebenzayo, ngitshele iGentoo kungenye into, lapho udinga izinsuku ezimbalwa zokufakwa
Isikhathi Imali. I-Arch yokudlala nokuzikhohlisa
Uchitha isikhathi sakho uma ufaka i-Kde ephelele noma i-Gnome ephelele, ebukeka njengenkunzi ephelele kimi ngoba ulayisha i-KISS ngokufaka izinto eziyinkulungwane ongazidingi.
Sengivele ngikutshela ukuthi awulahlekelwa ngaphezu kwamahora amabili
Ngamaphakeji ami ekuhlolweni ngisesikhathini samanje futhi lapho ngikubuza khona umbuzo ofana nowakho.Ngani kufanele i-Arch isebenzise, ​​lapho nginakho konke ukuzinza, ukuphepha nokuvuselelwa engikudingayo?
Ukuhlolwa kwe-Debian akuyona ukukhishwa okumsulwa, angikakuhloli ukuze ngikuqinisekise kepha yilokho engikuqondayo
Ngemininingwane yakho, iDebian inenketho yokufaka efana ne-Arch, lapho engingafaka khona kuphela engikudingayo
Lokhu kungamanga njengombhishobhi omkhulu, isifaki se-Debian Stable asiyona into elandelayo, elandelayo, elandelayo. Ngikwazile ukuyibheka kuDebian Lenny.
Bengingamthandi uDebian ngenxa yokungabekezelelani kwamaphakeji ngento encane ebhalisiwe, yingakho-ke ngiyisusile
Sengivele ngiyakutshela. Sizobona usuku lapho ukubuyekezwa okuningi kuzokwehlisa uhlelo
Gcina lokhu: Usuku olwenzeka kimi, uzoba ngumuntu wokuqala ukwazi
lapho-ke baqala ukungilethela izinkinga zokuzinza, yingakho njengoba uthi: "Ngiyamgxeka", ngoba nje angikuthandi lokho abe yikho, futhi ngikholelwa KULONKE ilungelo lami lokuvuma noma ukungavumi nokuthile.
Lesi yisizathu esifanayo sokuthi ngihlasele Ubuntu, futhi ngifaka lokho kwe-ubunto.
Futhi manje kubo bobabili:
Uhlala ufana njalo, konke okuthunyelwe kuba yi-Arch Vs X distro noma i-Debian Vs X distro.
Njengabaphathi ukuthi ungubani, kufanele ukumise lokhu bese uvula okuthunyelwe kwe-Debian Vs Arch bese ukhuluma ngakho ngoba isikhathi esiningi awukhulumi ngaso endaweni efanelekile
Lokhu ukuphela kwento engizophawula ngayo kukho konke lokhu .. UDebian Lenny uneminyaka endala, akunjalo? Ngabe kwenzeka kuwe ngendlela efanayo ne-KZKGGaara owazama okuthile eminyakeni eyinkulungwane eyedlule futhi osacabanga ukuthi kusenjalo namanje? Ngiyakumema ukuthi ulande iso le-Debian bese ubheka inketho: Isazi Faka.. Ake sibone ukuthi ucabangani ngamanga ami amakhulu.
Ngoba i-Virtualbox ibilokhu idlala ubuqili kakhulu uma kungenjalo uma ngiyizamile.
Noma kunjalo, ukugoqa akukho.
Engizamile kuLenny ukufakwa kwemodi yombhalo, futhi kwabonakala kuyinto elula kunazo zonke emhlabeni. Ngaleso sikhathi bengingazi nge-Arch
Ukube bengingakhungathekiswa yiwo wonke amaphakheji angasebenzi ngesikhathi esithile .. uff. I-Debian manje inomjikelezo wokuvuselela okusheshayo, kepha ama-distros ambalwa edlule .. ngunkulunkulu !!! Uma unenkinga, bekufanele ulinde izinyanga ukuthola isixazululo.
I-elav embi kakhulu, ukhuluma nge-Archlinux kube sengathi bekungubudedengu, ngokwesibonelo nge-desktop yethu esiyithandayo, baqale bayihlole ku-repo [gnome -stable] ngemuva kwezinsuku zokuhlolwa okubandakanya (imibiko yeziphazamiso, ukulungiswa, njll.) Kwe-repo [ukuhlolwa] lapho kudlulela kolunye uchungechunge lwezivivinyo, ukuze kufinyelele i-repo [eyengeziwe]
Ngakho-ke ngawo wonke amaphakheji, ama-desktops anegatsha lawo elingazinzile, kepha lawo angahlolwa, futhi kuphela uma esebenza ngendlela efanele, amaphakheji aya kungqikithi noma amanye ama-repos ngokuya ngephakheji.
Izindawo zokuphumula ze- [multilib] kanye ne- [comunity] zinezinqolobane zazo zokuhlola. Ngokuphawula kwakho, ukhombisile ukuthi awazi okuningi nge-archlinux noma ukuthi umthukuthelele, noma ngabe yisiphi isizathu, akakhulumi kahle ngawe elav.
UJo nanamuhla njengoba amaKristu esho, izikhathi zikaNkulunkulu ziphelele. Ngemuva kokuphawula ngenze i-pacman -Syu futhi oh kwaphuma isibuyekezo se-xorg-server, ngiyizamile ekuhloleni amasonto ambalwa edlule futhi yaphazamisa imvelo yokuqhafaza, izinkinga nge-bug ye-xorg entsha kanye ne-proprietary abashayeli be-nvidia, bephuze ukushiya isixazululo, kepha nakhu.
Ku-arch isoftware isetshenziswa ivuselelwe kahle kakhulu, futhi uma udida ngokuhlolwa noma ngama-repos angazinzile, kufanele wazi ukuthi kwenzelwa ukuhlolwa nokuthi ngokuqinisekile uthola izimbungulu ezithile. kepha lokho okufinyelela kumbindi, okungeziwe, ngisho nomphakathi kufinyelela kahle futhi ngokungafani nama-distros adume kakhulu, isoftware yakamuva, ezinzile nezinqolobane ze-archlinux uqobo.
Njengakuwo wonke ama-distros .. Kukhona okungahambi kahle bese beyakulungisa 😀
Anginalutho oluphikisana ne-Arch, ngivele ngikhuze isikhundla somfana (KZKG ^ Gaara) okuyikho abacabanga ukuthi akusebenzisayo kungcono kakhulu. Angikayihloli kahle i-Archlinux, kepha woza kumuntu, kufanele kube khona isinambuzane esincane ngoba akukho okuphelele. Mhlawumbe awunayo ne-hardware yakho, kepha nomunye umuntu. Okufanayo kuya kuwo wonke ama-distros.
Futhi ngihlale ngikutshela ukuthi ngikhuluma ngombono WAMI, ngokusuka kokuhlangenwe nakho KWAMI. U-Arch kuze kube manje ungisebenzisela izimangaliso, ngikutshele namuhla emahoreni ambalwa adlule, "esikhashaneni esedlule bengingazizwa ngikhululekile futhi ngijabule nge laptop yami", ngokwesibonelo, manje usufaka i-openSuse futhi isebenza kahle, ngiyayifaka futhi konke akuhambi kahle ngenxa yehardware yami (ngokwesibonelo), ngizothi angiyithandi futhi uzothi yebo. Futhi sobabili siqinisile ...
Ah kodwa usamile? Iya esidlweni sasemini, hamba 😛
Ngihlala ngisebenzisa i-SID futhi anginazinkinga ze-XDD ngaphandle kwalapho ngilungiselela ...
Njengamanje bengifana neminyaka eyi-1 noma emi-2 vele i-xd
U-Elav no-KZKG ^ uGaara abathukutheli… 🙂
Hahaha kungcono uzivumelanise ngoba lokho kujwayelekile Hahahahaha
Hahaha, ukube benginguwe, ngazivumelanisa nezimo ngoba lokho kujwayelekile hahaha .. Na, kepha izingxoxo ezinempilo .. Ngosuku engacasula ngalo, nginqamula ikhebula lenethiwekhi 😀
Ubhekene naleli phutha: i-dpkg iphazamisekile, kufanele usebenzise i-'dpkg –configure -a 'ngesandla ukulungisa inkinga, ngenzani?
Yebo, uvula ukuphela futhi njengezimpande ozisebenzisayo:
Noma umane wenze umyalo okhulunywe kusuka ku-Sudo….
impande @ debian: / # apt-get -t yokulinga ukufaka i-libreoffice
UMiguel linares kusho
Sawubona, ungangisiza kodwa useCanaima
Ungangitshela ukuthi ungawahlela kanjani ama-panels, amamenyu nakho konke okuseCanaima, ngicela uphendule umlayezo wami
Phendula uMiguel linares
kepha ngifuna ukufaka isiphequluli sewebhu se-chromium kepha ngithola iphutha lapho ngizama ukuphela kwempande futhi ngazitshela lokhu ukuthi ngikubeke endaweni yokugcina izimpande apt-get install -f ngiyikopisha kodwa ekugcineni lapho ifakwa ihlala iphuma la maphutha atholakele ngenkathi kusetshenzwa :
E: Inkambiso / usr / i-bin / dpkg ibuyise ikhodi yephutha (1)
ngingakulungisa kanjani lokho ngicela ungitshele
Nge-terminal: Ikhalenda neCal.
Uthanda izimoto? Zama ama-Speed ​​Dreams 2.0 Beta 1